Akenelisekile ngonompempe athi babadonsa ngejazi njalo uma kumele bawine uMaduka weCeltic - Impempe
Akenelisekile ngonompempe athi babadonsa ngejazi njalo uma kumele bawine uMaduka weCeltic
Umqeqeshi weBloemfontein Celtic, uJohn "Vuli'gate" Maduka ukhala ngonompempe bababamba inkunzi
Ushaya amakhala umqeqeshi weBloemfontein Celtic, uJohn Maduka, ngephenathi enikwe AmaZulu agcine ebashaya ngo 4-3 emdlalweni weDStv Premiership obudle ngokushuba nezigigaba ezikushiya ubambe ongezansi eThekwini ngoLwesibili.
ICeltic iwazame wonke amaqhinga ewaziyo ukuthola okuthile kulo mdlalo kodwa inhlanhla ibingaseqenjini lasekhaya, eliwine ngegoli elihle likaTapelo Xoki ekugcineni.
Nakuba Usuthu kuyilona olusheshe lwawabona kuqala amapali lapho egxunyekwe ngakhona kodwa iCeltic ibilokhu ibuye njalo baze bacishe bacazelana ngamaphuzu.
Kukona konke lokhu uMaduka ukhala ngokuthi iphenathi ethathwe nguXoki bekungafanele kubonakale sengathi umdlali wakhe iphutha ulenze engaphakathi kwebhokisi.
“Angikholwa ukuthi bekufanele banikwe le phenathi ngoba idaleke ngaphandle kwebhokisi. Sekuqala ukujwayeleka-ke kodwa ukuthi sibe sebhadini lonompempe okubukeka sengathi abafuni sithole okuthile emidlalweni.
“Ziyasiphika izinqumo kodwa kunzima ngoba sekuqala ukwenzeka kuyona yonke imidlalo. Lokhu kuyasikhubaza ngempela ngoba sekwenzeke emidlalweni eminingi njengoba kwenzekile nakulo mdlalo,” kuzikhalela uMaduka.
Uyakhala ngendlela okungene ngayo negoli lesibili uMaduka, obelokhu ekufake njalo enkulumeni yakhe ukuthi sekuqala ukujwayeleka ukuthi bafakwe umunwe esweni yize ebengaqondise kubani.
“Besingenza kangcono egolini lokuqala kodwa kwalona sengathi lishaye esandleni somdlali waMaZulu. Uma siya kubona besibukeka siyinkinga kwaze kwaba nezikhathi esiwombeni sokuqala lapho besiwuphethe khona umdlalo.
“Nakwesesibili isiwombe bekuyinto efanayo kodwa lanqaba nje ukungena igoli. Ngikholelwa ekutheni besingawunqoba lo mdlalo ngoba besinawo nathi awethu amathuba kodwa lutho ukuwasebenzisa ngendlela.”
Uvumile ukuthi i-freekick kaXoki ibiyinhle ngale ndlela yokuthi ibinganqoba noma yimuphi umdlalo.
“Inkinga yethu isemuva ngoba uma uzoshaya amagoli amathathu emdlalweni kufanele uwunqobe. Siyakwazi lokhu futhi kuyaphoqa ukuthi sikulungise ngoba izoqhubeka le miphumela ukusihlehlisela emuva ekubeni sinconywa ngokuthi sidlala ibhola elihle,” kuphetha uMaduka.
Previous Previous post: Ithwaliswe uthayela kunomoya eThekwini iPirates ishaywa yi-Arrows
Next Next post: Kuhlwa emini kwiPirates ezishayela ngonyawo lonwabu emjahweni wesicoco seligi